Imivimbo ye-Wellion CALLA (Wellion CALLA) No. 50 > Amamitha kashukela egazi
IGlucometer Wellion Calla: ukubuyekezwa kanye nemichilo yokuhlola amanani
Imivimbo yokuhlola ye-Wellion CALLA No. 50 glucometer
Imichilo yokuhlola ayidingi ukungena kwekhodi yezandla.
Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi: Izinyanga eziyisithupha (eziyisithupha) (izinsuku ezingama-180) kusukela ngesikhathi sokuvula ibhodlela.
Izimo zokugcina - 8-30 ° С
Isithako esisebenzayo emigqeni yokuhlola: iGlucose oxidase
I-CALLA Test Strips Ifanela Yonke Imitha ye-Wellion
Imikhiqizo efanayo nezinsizakalo ezivela ku- "Dialand" Online Store (Dialend) "
Ungathenga izimpahla Imichilo ye-Test Wellight Calla (Wellion CALLA) No. 50 enhlanganweni online Isitolo se- "Dialand" (Dialend) ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu. Izindleko ngu-175 UAH., Futhi i-oda eliphansi ngu-1 pc. Okwamanje, umkhiqizo usesimweni se- "esitokweni".
Isitolo se-Intanethi se-Enterprise "Dialand" (Dialend) ngumthengisi obhalisiwe kusayithi BizOrg.su.
E-portal yethu, ukuze kube lula, inkampani ngayinye inikezwa isikhombi esiyingqayizivele. Isitolo se-Dialand online (Dialend) sine-ID 343657. Imizila yokuhlola i-Wellion CALLA No. 50 inesikhombi esizeni - 6310469. Uma unobunzima bokuxhumana nenkampani yesitolo se-Dialand online (Dialand) - Nikeza okokuhlonza inkampani noma umkhiqizo / insizakalo kwinkonzo yethu yokusekelwa komsebenzisi.
Usuku lokudalwa kwemodeli - 09/06/2013, usuku loguquko lokugcina - 11/16/2013. Ngalesi sikhathi, umkhiqizo ubukwe izikhathi ezingama-411.
Incazelo yedivayisi yokulinganisa
Umhlaziyi uthengiswa ezitolo ezikhethekile, kumakhemisi nasezitolo ze-inthanethi. Abathengi banikezwa imibala emfashini yale divayisi - ngombala onsomi, oluhlaza okotshani, omhlophe kanye no-graphite.
Ngenxa yezimpawu zayo ezihlukile, i-Wellion CallaLight glucometer ivame ukukhethwa ukuhlolwa kwegazi ngamazinga we-glucose ezinganeni nakubantu asebekhulile. Idivayisi ikhuphuke ngokunemba. Uma kunesidingo, umuntu onesifo sikashukela angathola amanani aphakathi kosuku, isonto elilodwa noma amabili, inyanga noma izinyanga ezintathu.
Kwidivaysi yokulinganisa, kungenzeka ukukhetha okukodwa kokukhethwa kwezimpawu ezintathu ze-alamu, okuzozwakala njengesikhumbuzo sesidingo sokuhlolwa ushukela wegazi. Ngokwengeziwe, ungachaza umaki womngcele ngamanani aphezulu nange ubuncane.
Lapho sekutholwe ubufakazi obungaphezu kwale mikhawulo, insiza isayina umuntu onesifo sikashukela. Lo msebenzi ukuvumela ukuthi ukhombe ngesikhathi esifanele ukwephulwa okukhulu, ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga futhi uthathe izinyathelo ezisheshayo zokwenza amazinga kashukela egazini abe ngokwejwayelekile.
Idivaysi iyakwazi ukugcina kuze kufike ku-500 yezilinganiso zikashukela wegazi wakamuva kanye nesikhathi nosuku lokufunda. Le divayisi inombukiso obanzi onezinhlamvu ezinkulu ezicacile, ngakho imitha ye-Wellion Calla inezibuyekezo eziningi ezinhle ezivela kodokotela nakubasebenzisi.
Ipeni lokubhoboza linekhanda elisuswayo, ngakho-ke le divayisi ivunyelwe ukusetshenziswa ngabashukela abaningana. Ikhanda ligaywa inzalo ngaphambi kokuthi isibambo sisetshenziswe ngomunye umuntu.
Ikhithi ifaka izinto zokulinganisa, isethi yamalambu ayi-10 oyinyumba, imichilo yokuhlola engu-10 Wellion CALLA Light, isembozo sokuthwala nokugcina ucingo, incwadi yemiyalo, nencwajana yokusetshenziswa kwezithombe.
Imitha isebenzisa indlela yokuhlonza nge-electrochemical. Njengesampula, kusetshenziswa igazi le-capillary. Isikrini esibanzi esinezinhlamvu ezicacile ngaphezu kwalokho sinokukhanya emuva okulula.
Ukulinganiswa kwezinga loshukela wegazi kwenziwa ngaphakathi kwemizuzwana eyisithupha, lokhu kudinga ukuthola inani elincane legazi elinomthamo ongu-0,6 μl. Ngaphezu kwalokho, umsebenzisi unikezwa ithuba lokwenza amanothi mayelana nokuhlaziywa ngaphambi nangemva kokudla.
Uma kunesidingo, umuntu onesifo sikashukela angathola izibalo ezijwayelekile ngesonto, amasonto amabili, inyanga eyodwa kuya kwezintathu. Idivaysi yokulinganisa ifakwe ngezimpawu ezintathu eziyisixwayiso futhi inomklamo we-ergonomic.
I-Wellion CallaLight glucometer isebenza ngamabhethri amabili we-alkaline e-AAA, anele ngezilinganiso eziyi-1000. Kufakwa i-USB slot ukuvumelanisa nekhompyutha yomuntu siqu, ngenxa yokuthi isiguli singagcina yonke imininingwane etholakele kwimidiya ye-elekhtronikhi.
Ubukhulu bedivaysi bungama-69.6x62.6x23 mm, i-glucometer inesisindo esingu-68 g kuphela. Uma ulinganisa igazi ngoshukela, ungathola imiphumela ebangeni ukusuka ku-20 kuye ku-600 mg / dl noma ukusuka ku-1.1 kuye ku-33.3 mmol / lit. I-calibration yenziwa nge-plasma, idivaysi ivula ngokuzenzakalela lapho i-strip yokuhlola ifakiwe ku-socket yedivayisi.
Ukunquma ushukela ekhaya, udinga ukuthenga isethi yemigwaqo yokuhlola iWellion Calla. Ukufaka ikhodi ngesikhathi sokuqalisa sedivayisi akudingeki. Ngemuva kokuvula ukufaka, imichilo yokuhlola ingagcinwa izinyanga ezingekho ngaphezulu kwezi-6.
Umenzi unikeza iwaranti yeminyaka emine emikhiqizweni yabo.
Izinzuzo zedivaysi yokulinganisa
Ngokuvamile, idivaysi ibhekwa njengedivaysi elula futhi enembile yokulinganisa ushukela wegazi. Kokubukeza kwabo, ukuba khona kwe-LCD ebanzi engemuva kakhulu kuvame ukubizwa ngokuthi yi-plus.
Izinzuzo zihlanganisa nokukwazi ukusetha ama-alamu amathathu ahlukene, asetshenziswa njengezikhumbuzo zesidingo sokuhlaziywa. Uma kunesidingo, umuntu onesifo sikashukela angabeka umaki abe ngumphumela omncane nomkhulu.
Ukuba khona kwenkumbulo enesibalo sokugcina imiphumela yocwaningo nosuku nesikhathi kufanelekile kubantu abathanda ukulandela izinkomba isikhathi eside futhi baqhathanise namandla ezinguquko.
Kaningi, imitha iyakhethwa ngenxa yokuba khona kokubhoboza ipeni okusebenzayo nekhanda elingena esikhundleni, olungasetshenziswa inzalo lusetshenziswe ngabantu abahlukile. Intsha ibonga ngokukhethekile ukwakheka kwanamuhla nokukwazi ukukhetha umbala wecala kulezi zinketho ezine ezikhona.
Futhi ekuthengisweni, ungathola imodeli efanayo kusuka kulo mkhiqizi u-Wellion CallaMini. Le yidivaysi yokulinganisa ehlangene kakhulu enesimo esikahle, isibonisi esibanzi esikuvumela ukuthi wenze ukuhlolwa kwegazi ngoshukela nsuku zonke ekhaya.
Isifundo futhi sidinga i-0.6 μl yegazi, imiphumela yokuhlaziya ingatholakala ngemuva kwemizuzwana eyi-6. Idivaysi iyakwazi ukugcina izilinganiso ezingama-300 zamuva, okuyisici esehlukanisayo sedivayisi.
Idivaysi, efana nemodeli yokukhanya, inesibani sasemuva, umsebenzi wokusetha izinketho ezintathu zezikhumbuzi, imbobo ye-USB yokuvumelanisa nekhompyutha. I-Wellion CallaMini glucometer ine ubukhulu 48x78x17 mm nesisindo esingu-34 g.
Idivayisi iqala ngokuzenzakalelayo lapho ufaka umucu wokuhlola, usindisa izinkomba ngosuku nesikhathi. Ukulinganiswa kwemitha kwenziwa ngeplasma yegazi.
Ochwepheshe bazokutshela ukuthi ungayikhetha kanjani i-glucometer kuvidiyo ekulesi sihloko.
Le nkampani ibuya ngokulandela umthetho wokuvikelwa kwabathengi
Buyisela futhi Shintsha imigomo
Isigaba 9 soMthetho wase-Ukraine "On Protection of Consumer rights" sinikeza ilungelo lomthengi lokushintshanisa izimpahla ezingezona zokudla zekhwalithi efanelekile efanayo uma izimpahla ezithengiwe zingalingani ngesimo, ubukhulu, isitayela, umbala, usayizi noma ezinye izizathu kungeke zisetshenziselwe injongo yakhe, uma lo mkhiqizo ayisetshenziswanga futhi uma isethulo sayo, izakhiwo zabathengi, izimpawu, amalebuli nedokhumenti yokuhlala ikhishwe ngumthengisi kanye nezimpahla zigcinwa.
Umthengisi akanalo ilungelo lokwenqaba ukushintshanisa (ukubuyisa) izimpahla ezingekho ohlwini uma ehlangabezana nazo zonke izidingo ezibekwe ku-Art. I-9 yoMthetho (ukugqoka kokuhweba, amalebula, izimpawu kuyalondolozwa, kukhona umqulu wokuxazulula, njll.).
Uhlu lwamanje lungatholakala lapha.
Lapho isilwane sikashukela
Sanibonani nonke! Ngifuna ukubhala isibuyekezo nge-glucometer yezilwane. Kwenzeka ukuthi ikati lami, lase ligugile, laqala ukuba nesifo sikashukela, futhi udokotela waseluleka ukuba sithenge i-glucometer yezilwane, ukuze singashayeli ikati ngokunikela ngegazi okuhlala njalo emtholampilo. Imitha kashukela wegazi lomuntu ayikwelulekwa ngathi, ngoba ihlelwe ngokuzenzakalela abantu futhi inikeza imiphumela engalungile.
Ngemuva kokusesha i-Intanethi, ngithole uhlobo olulodwa kuphela lwe-gluceter yezilwane, engiyithengile. EMoscow, ngithole izitolo ezi-2 kuphela ezikuthengisayo, futhi intengo lapho yayiluma kakhulu (kusuka ku-3.3-4t.r.) Yize kwakuhlolwa imichilo eya kumitha kufanele ithengwe ngokwahlukana, ayifakiwe kukiti! Intengo yemichilo, efanayo nemitha, kwiphakheji ingama-50pcs, impilo yeshalofu unyaka owodwa. Ngifisa ukonga okuncane emgodini, ngabiza ngqo umphakeli, futhi bangilethela ukuhanjiswa kwamahhala ngenani lentengo elishibhili kunaleyo esitolo.
manje mayelana nedivayisi uqobo
Umkhiqizi wezwe i-Austria. Yakhelwe amakati, izinja namahhashi. Isethi ifaka isikhwama ngesandla, ibhethri elingena esikhundleni salinye, izibalo ezi-3 zohlobo ngalunye lwesilwane, amalambu, ipeni lokunamathela, ithuluzi uqobo lwalo, incwadi yokuqoshwa, ikhadi lewaranti, imiyalo ngesiRashiya. Imichilo yokuhlola ayifakiwe. Uma uvula idivaysi, kufanele usethe usuku nesikhathi. Kuyo kunezinkinobho ezi-2 kuphela zemenyu ye-M, ukufakwa kanye nokukhethwa kwe-S, ukucaca. Phansi kune-slot ye-chip (ngine-cat, ngakho-ke ngiphoqe i-chip ukuthi ibe luhlaza, yenzelwe amakati), umucu wokuhlola ufakwa ngaphezulu, uma ufaka umucu, idivaysi izovuleka, okusho ukuthi ilungele ukusetshenziswa. Kuyadingeka ukubhoboza isibambo ku-kit, lapho kufakwa khona i-lancet. Shaya izindlebe kusukela ngaphakathi noma kumaphaseji we-paw. Ikati lami alilimalanga. Isikhathi sokulinganisa yimizuzwana emi-5. Ngokuvamile, ngijabule ngedivayisi, ngizojabula ukuphendula imibuzo yakho, uma ikhona)